Nepali Christian Bible Study Resources - कैद पत्रहरू
» अध्ययन मालाहरू » नयाँ नियमका पुस्तकहरू » ७-कैद पत्रहरू
तर यदि तपाईंको भाग्य राम्रो भएन भने नि? कामकुराहरू तपाईंले चिताउनुभएको अनुसार भएन भने के हुन्छ होला? यदि यी कुराहरू भए भने...
क.	कामकुराहरू राम्रो हुन जाँदा
घ.	साताको कम्तिमा एक पटक
क.	हाम्रो परिस्थितीहरूमा आनन्द गर्नुपर्छ
ख.	विश्वको अवस्थामा र दैनिक खबरपत्रिकामा हामीले पढेका समाचारहरूमा आनन्द गर्नुपर्छ
ग.	हामी आफैंमा आनन्द गर्नुपर्छ
घ.	प्रभुमा आनन्द गर्नुपर्छ
« मण्डलीमा समस्याहरू
नयाँ विश्वासीहरूका निम्ति निर्देशन »